अब को को नेता जाँदैछन् जेल ? अति भएपछी लहनुले खोलिदिए एकएक नेताको पोल - Public 24Khabar
Home News अब को को नेता जाँदैछन् जेल ? अति भएपछी लहनुले खोलिदिए एकएक...
अब को को नेता जाँदैछन् जेल ? अति भएपछी लहनुले खोलिदिए एकएक नेताको पोल
हालै एक महिलाले आफ्ना पतिको मृत्युपश्चात् टीका र पोते फुकाल्न नमानेको समाचार व्यापक भयो । र, यसलाई महिलाको पक्षमा क्रान्तिकारी कदमजस्तो पनि ठानियो । जीवित हुँदा पति–पत्नी एकअर्कालाई प्रेम गर्थे । विडम्बना, दुईमध्ये एकको मृत्यु भइदिन्छ । हिन्दु समाजमा पतिको मृत्युसँग महिलाका लागि उनको साथको मात्र मृत्यु हुँदैन, चुरा, टीका, सिन्दूर, पोते, शुभ मानिने राता परिधान पनि छुट्छन् ।
पतिको देहान्तपछि, पत्नीले विवाहित देखिन प्रयोग गरेका गरगहना, सिन्दूर, पोते आदि सम्पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर पतिवियोगको पीडा, त्यसमाथि परिधान त्यागेर विरही देखिनैपर्ने बाध्यता । यस्तो संस्कार हाम्रो मनमस्तिष्कमा जड बनेर बसिसकेको छ । महिलाहरूले आफूलाई यस्ता संस्कारमा ढालिसकेकैले पुरुषहरूमा पनि उनीहरूको खुसी आफ्ना नाममा लगाएका सिन्दूर–पोते नै हो भन्ने छाप परेको हुन सक्छ । सान्त्वना दिने क्रममा कोही पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई उनको खुसी सिन्दूर, चुरा, पोते पनि हुन् भन्ठानेर ती चीज लगाइराख्न भनेका पनि हुन सक्लान् । तर समाजलाई पच्दैन ।
पतिको मृत्युपछि पनि महिलाले आफूलाई सिँगार्ने या नसिँगार्ने, नितान्त व्यक्तिगत रुचिको विषय हुनुपर्थ्यो, यदि समाजमा मानवीय मूल्यमान्यता, छनोटको स्वतन्त्रतालाई पनि महत्त्व दिने गरिएको भए । मृत्यु भइसकेका त भई नै हाले तर बिछोडिएकाहरू, विशेष गरी महिलालाई उनको जीवन पुनः अघि बढाउन, उज्यालोतिर लैजान, भरपूर बाँच्न समाज र परिवारले सहस्र माया र प्रेम दिनुपर्छ । पतिबाट छुट्टिएर एकल जीवन बिताइरहेका, बालबच्चा आफूसँग राखेर जीवन डोर्‍याइरहेका महिलाका हकमा पनि यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । तर परिवार र समाज एकल महिलामैत्री बन्न अझै कैयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
यस्ता विभेदित सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग निडर हुँदै सकारात्मक र स्वतन्त्र रूपले बाँच्ने साहस पनि एकल महिलाले गर्नैपर्ने हुन्छ । मृत्युशोकपछिका संस्कार पनि पुरानै छन्, एक्कासि महिलाका परिधानमै उजाडता ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका । महिलाले दोस्रो बिहे गर्ने निर्णय गर्दा या पतिको मृत्युपश्चात्, पतिका नाममा लगाइएका शृंगार उनको सम्झनामा लगाइराख्छु भन्दा पनि क्रान्ति मानिने अवस्था छ ।
हजारौं वर्षदेखिको पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाका हाँगाबिँगाहरू नै महिला अविकासका प्रमुख कारक हुन् । समाज विकासका क्रममा जब महिलाहरू पनि सचेत हुन थाले, तब आफू पुरुषभन्दा तल्लो स्तरका रूपमा परिभाषित हुँदै आएको वास्तविकता महसुस गर्न थाले अनि शक्ति र सामर्थ्यको लेखाजोखा पनि गर्न थाले । सीमित नै सही, महिलाले पनि पुरुषसरह कमाउन, उस्तै पेसामा पनि सफलता हासिल गर्न थाले । आफू र पुरुषमा केही शारीरिक भिन्नता मात्रै रहेछ, अरू सब त समाजले बनाइदिएको भिन्नता पो रहेछ भनेर महिलालाई बोध भयो । महिलाहरू बच्चा जन्माउने र हुर्काउने जिम्मेवारीले पछि पारिएका हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएकाले कतिपय महिला घरजम नै नगर्न तयार हुँदै गए ।
Previous articleExclusive: प्रचण्डले कारबाही गरे ओलीलाई, ओलीको कुर्सि माधव नेपालको कब्जामा, ओलीलाई बर्खास्त गरियो
Next articleकुवेतको कोमामै अस्ताइन् २७ वर्षकी श्रम सहचारी विपना